Ukunakekela ama-violets ekamelo
Unayo i-sill ewindini ekhishini futhi akukho lutho olukhula kulo? Awuthande ngempela izimbali, ngoba aziqhakazi futhi zibhubha? Sinikeza iseluleko esilula - hlaziya ama-violets! Lokhu kungenakuzithoba, futhi mhlawumbe "hhayi izitshalo" ezitshengiswayo, kodwa zingaki izinhlobo nezinhlobonhlobo ezahlukene! Ngakho, ukunakekela izimbali zendawo: i-violets - isihloko sesengxoxo yanamuhla.
Ama-violets angaqhakaza cishe unyaka, futhi ngenxa yalokhu adinga ukuchelela njalo kanye nomswakama omncane (yingakho bebhekwa kangcono ekhishini!). Amanye amathiphu alula wokunakekela ama-violets aqoqwe.
Ukushisa kwelanga okufanele kunazo zonke ze-violets zezimbali, uma ufuna ukuba ziqhakaze futhi zikujabulise isikhathi eside, yi-20 - 24 ° C. Uma izinga lokushisa lizinzile 20 ° C - izimbali ziyoba ezinkulu futhi zizohlala isikhathi eside. Ukuze izitshalo ezincane, izinga lokushisa eliphakeme liphakeme kakhulu: 23 - 24 ° C. Izidakamizwa ziyizitshalo eziqinile, zingakwazi ukumelana nokunciphisa izinga lokushisa ebusika kuya ku-10 kuya ku-5 ° C. Kulokhu, bayanciphisa ukukhula kwabo. Ehlobo, lapho izinga lokushisa likhuphukela ku-30 ​​° C noma ngaphezulu, ama-violets ayeka ukukhula.
Ekushiseni, ungadluli ama-violets ngezimbali (zisasebenza kabi). Kudingekile ukuba unqume izinsika, uphuze isitshalo kusihlwa, ukwandise umswakama ekamelweni. Kusihlwa, ungaphinda ufeze amaqabunga avela ku-pulverizer. Ku-violets, izinguquko ezizenzekelayo ekushiseni ziyingozi kakhulu. Ukuthuthukiswa kwemvelo kwama-violets, umehluko we-2-3 ° C phakathi kwamini nobusuku kuyadingeka.
Izwe lakwa-violets yihlathi lehlathi. Lapho abatholanga ilanga ngokuqondile, kodwa imisebe eminingi ehlakazekile. I-Violets kufanele ivikelwe elangeni eliqondile. Kungcono ukuthi ungakhulumi kumafasitela aseningizimu.
Ngokukhanya okukhulu, amaqabunga e-violet azogoba phansi, azokhipha futhi aphenduke aphuzi, khona-ke ayobe ebohlaza okwesibhakabhaka nhlobo. Amaqabunga amancane asuke ekhubazekile, iziqu ezincane zikhula, zifihla emaqabunga, izimbali ziphelile, ngokushesha ziyafa. Ukushisa kubonakala emaqabunga (izindawo ezibomvu).
Ngenxa yokuntuleka kokukhanya, i-cuttings iba yinde, amaqabunga elula phezulu, alahlekelwa ukukhanya kwawo, aphenduka amancane, ama-specks ayanyamalala kule violets ehlukahlukene. Izitshalo ngokwazo ziyayeka ukukhula.
Ukuze uqiniseke ukuthi amahlathi awunakukhubazeka futhi athuthuke ngokulinganayo, izimbiza zidinga ukushintshaniswa ngezikhathi ezithile - lokhu kuyinto ebalulekile yokunakekela le mibala egumbini. Izidakamizwa zidinga ukuhlanzwa njalo ngothuli ngetshezi elithambile futhi ngezinye izikhathi zihlanza. Ama-violets anamaqabunga aluhlaza afaka ukukhanya okungaphezulu kunama-violets anamahlamvu we-wavy alula.
I-Violets ivela ezifundeni ze-equatorial ze-Afrika, lapho zikhula khona eduze kwamanzi. Ukungcola kulezo zindawo kufikela ku-60-70%. Kulezi zimo, izimbali ziba zikhulu, zikhanya futhi ziqhakaze.
Ezindaweni zokuhlala umswakama awufinyeleli kabili kufika ku-30-40%, futhi ngenkathi yokushisa ngisho nangaphansi. Ama-violets avame ukufakwa ekhishini, lapho izinga lokushisa kanye nomswakama ngokuvamile lidlula isilinganiso sefulethi. Ungabeka izimbiza ngama-violets kumapellets ngobumba obunwetshiwe noma u-sphagnum, ogcwele amanzi amabili / 3.
Ungakwazi ukuphakamisa umswakama ngokupuniza, kepha kufanele sikhumbule ukuthi amaqabunga ama-violets ayithandi lapho ethola amaconsi amanzi-lokhu kungaholela ekubola. Ngakho-ke, kungcono ukudala umsila onomanzi ozungeze isitshalo. Ukuze wenze lokhu, amabhodlela afanelekile avela ku-spray - enza amaconsi amancane kunezitshalo eziphambene ezivamile.
Ukuze ukwandise umswakama nxazonke ze-petiole ze-petioles ezihlahleni ezincane, kungenzeka ukudala amajuba, ngoba ngaphandle kwemiswakama ephezulu umhlaba uzokoma ngokushesha kakhulu, okulimaza izimpande ezincane ezibuthakathaka. Ukuze umfana afanele i-polyethylene, i-tin, ibhodlela leplastiki noma ezinye iziqukathi ezibonakalayo. Kubalulekile ukuqapha ukungabi khona kwamaconsi ngaphakathi kubaba, uma bevela, lo mfana udinga ukuphuza umoya.
Uma umoya usomile kakhulu, amathiphu amaqabunga aphikisana futhi aphuzi, izimbali ziyabuna ngaphandle kokuqala isigaba sokuthuthukiswa. Uma umswakama uphakeme kakhulu, izifo ze-fungal zingenzeka kuma-rosettes nasezimpandeni zezitshalo, ngenxa yokuthi inqubo edingekayo yokukhuphuka emagqabeni ayama, ikakhulu uma kungenwa umoya omusha. Kanye ngenyanga, amaqabunga ama-violets angahlanzwa ngaphansi kwamanzi afudumele, awasuse othulini ngebhashi noma ibhulashi elithambile. Emva kokugeza lesi sitshalo kufanele somiswe, sivikele kusuka ekuqalisweni futhi kungabi nhlobo ukuveza ilanga elivulekile.
Kungcono ukusebenzisa umanyolo obunzima. Umthamo oboniswe kuphakheji yama-violets kufanele unciphise ngesigamu. Ungadluli umthamo kunoma yikuphi. Kubalulekile ukunamathela ekunciphiseni ukunciphisa kwenkathi kumanyolo izikhathi ezingu-2-3 ebusika. Uma inhlabathi isomile kakhulu, kungcono ukuphuza isitshalo amahora amabili ngaphambi kokufaka umanyolo. Ukugqoka okuvame ukuphakanyiswa ukuthi kuthulwe phezulu, hhayi ku-pan-saucer.
Ukuphuza ama-violets ngokufanele njalo, afanele lawa manzi, ngaphandle kokumisa inhlabathi, kodwa hhayi ekuholeni kwamanzi. Amanzi akufanele awele endaweni yokukhula (isikhungo) sesitshalo. Ukubola kwephuzu lokukhula kungabangela ukubola kwehlathi lonke. Ikakhulu lokhu kusebenza kuma violets amancane. Ama-violets ama-adult kufanele aphuze lapho ungqimba oluphezulu lwenhlabathi loma. Ama violets amancane avame ukuphuziswa kaningi kangako.
Kufanele uchithe ama violets njalo ngesikhathi esifanayo (ucabangela ukuqala kosuku lokukhanya nenkathi). Entwasahlobo nasehlobo, ama-violets kufanele atheleke ekuseni, futhi ngesikhathi sekwindla-ebusika - ntambama. Umthamo wokunisela kufanele ukhethwe ngamunye. Azikho izincomo ezijwayelekile. Amanzi kufanele abe ngamanzi, ahlukaniswe izinsuku ezingu-2-3 esitsheni esivulekile se-chlorine yesimo sezulu. Ukushisa kwamanzi kungcono ukhethe igumbi noma okuncane kakhulu.
Kunezindlela ezihlukahlukene zokunisela: okunconywa kakhulu ukuwa amanzi kusuka phezulu, kodwa kufanele uphele amanzi amancane emaphethelweni ebhodweni. Kubalulekile ukubuka, ukuthi amanzi awazange afinyelele ekukhuleni nasemaqabheni amancane. Ukunisela kuyamiswa lapho amanzi egeleza e-saucer.
Ukunisela kusuka phansi kulula, kodwa kufanele sikhumbule ukuthi udinga ukuthulula amanzi amaningi njengoba inhlabathi ingawuthola. Amanzi angaphezu kwamanzi athululelwa kusuka ku-saucer ngesigamu sehora.
Ukuphuza okulumayo kwezimbali zasendlini yilowo ophethe imbobo embizeni yendwangu yendwangu, okuyinto enye ekupheleni kwayo inconywa emgodini wamanzi lapho kufakwe khona ibhodlela lesitshalo. Kulesi simo, ibhodlela akufanele lithinte amanzi. Amanzi akhuphuka ngenxa yomphumela we-capillary.
Ngokuphuza ngokweqile, inhlabathi yokuvuthwa kungenzeka. Kulesi simo, amabala amanzi angabonakala emaqabunga, amaqabunga ngokwawo angase awele, izimpande zibe mnyama futhi zife ngenxa yokuntuleka kwe-oxygen. Kunesidingo sokunakekelwa okukhethekile kwezimbali zasendlini - ama-violets aphethwe kangcono ngesisombululo esibuthakathaka se-potassium permanganate noma esikhundleni senhlabathi.
Njengoba kunamanzi anganele, inhlabathi iyoma, ibeka ngemuva kwemiphetho yebhodlela. I-violet enjalo kufanele ifakwe esitsheni samanzi, kuze kube yilapho inhlabathi igcwele umswakama. Uma uphuza ngamanzi aqinile kakhulu emhlabathini, i-white crust of salts ingahle ifake. Kulesi simo, ungqimba oluphezulu lwenhlabathi kufanele lushintshwe.
Uma iseluleko sibonakala siyinkimbinkimbi kuwe, ungaphelelwa ithemba. Awudingi ukwenza konke! Into esemqoka ukufeza izidingo eziyisisekelo futhi ubheke ngokucophelela izitshalo. Ekugcineni, ama-violets ami ayakhula - okusho ukuthi ungakwazi!
Indlu yezitshalo i-agave
Izimbali zasekhaya: hybrid cineraria
Isitshalo sezindlu ayr
Ukukhula kwemifino yokudla. Ukukhethwa kweziqukathi zemifino ekhulayo
I-Sound Resonance - I-Therapy Music
Indlela yokuhlonza ama-cheekbones nge-makeup: 3 izindlela ezilula
Inkinga ngesitayela se-Azerbaijani
Ama-Esoterics Kwabaqalayo: Ukwethula Ubuhlakani Bendalo
Ukudla kusuka ku-cellulite nesisindo esiningi
Ama-salt salt aseJapan - izithako zesimiso sasendulo
Imidlalo nemincintiswano yeSanta Claus ne-Snow Maiden: funny ekhaya nezingane, kumnandi for enkulisa kanye nesikole, kumnandi for the inkampani
Umbhali owaziwayo uTatyana Ustinova
Isitshalo seqanda esitsheni
Ukuhlinzwa kwePlastiki kungakanani okubiza ngayo
Vula ikhekhe nge ukhilimu omuncu ne-kiwi